Zumba - chiiko? Zumba Fitness: ongororo
Boka idzva reZumba Workouts rave rakakurumbira mumakirabhu akasimba kutenderera pasirese yapfuura. Kutanga pamagumo e90's muColombia, vanozivikanwa saNatalie Portman, Emma Watson, ...
Dziva rinoshanda kunaani uye sei?
Mafashoni ehupenyu hune hutano uye anowanzoita chiitiko chemuviri anosiya sarudzo yemitambo mitambo mukusarudzika kwemunhu. Kune anogara muguta remazuva ano, sarudzo iri nyore kwazvo yekuchengetedza chimiro chakagwinya uye rugare rwepfungwa ...
Mhepo isina Makarov pistol: hukuru hunhu uye kuongorora
Iyo Makarov pneumatic pistol ikopi inenge izere yeiyo chaiyo, inorwisa "Makarov", iyo yakaita kuti zita remusiki wavo rizivikanwe pasi rese. Musiyano mukuru pakati pneumatic vhezheni ndeye, hongu, yakaderera simba, idiki caliber uye ...
Yoga pose: mazita, tsananguro, kurovedzera kwevatambi
Rwiyo rwemazuva ano rwehupenyu haruwanzoita kuti ruregedze kushungurudzika kubva kune tsandanyama dzemuviri nenguva, zvinozopedzisira zvaunza kushushikana kusingaperi, kusagadzikana mumuviri kana kurwara kwakasiyana siyana. Kuti udzivise izvi, murume anoedza ...
DIY elektroniki hove hove - zvakanyanya hupfumi
Mazuva ano, mabheti emagetsi ekubata hove, kushanda pane musimboti wezvekutinhira kwakadzama, kwave kungove kusingawanzoitika. Ivo vanoshandiswa nehuwandu hwakawanda hwakaringana vateveri ve "kunyarara kuvhima." Izvo zvinozivikanwa kuti hove dzinogara dzichiratidzira ...
Shavarsh Karapetyan ingano. Feat of Swimmer Shavarsh Karapetyan
Akaponesa vanhu hupenyu hwake hwese: pakutanga akanunura timu mune yeairosi mazhinji epasi, iye akabva aburitsa vanhu mu trolleybus iyo yakapinda pasi pemvura, iye achibva abvisa vanhu mumoto. Muhupenyu chaihwo, izvi ...
Kremlin kudya, menyu pane 20 USD Chigadzirwa uye Score Tafura
Huwandu hwakawanda hwekudya hwakagadzirwa nhasi, asi humwe hwehurongwa uhwu hune zvahunza. Chero chekudya chinotadzisa kudya kweprotein kwakawandisa, kana inopa chikafu chidiki icho vanhu vazhinji vasingakwanise kuchiriritira ..
Alexey Popov - izwi reFormula 1 muRussia
Mutapi venhau ane tarenda uyo akashanda pane akasiyana terevhizheni terevhizheni, A. Popov anogara akabatikana nemapuroo matsva. Semunhu anotsinhira uye muratidziri wechirongwa chemunyori, anogovana nehupenyu hunhu hunokwezva kutaridzika uye rudo rwevateereri. Pane peji rangu ...
Chii chinonzi ultras. Nhabvu Ultras
Chii chinonzi "ultras", chinonzwiwa nevaya vane hukama nebhola kana vanofarira zvemitambo № 1 papasi. Izwi iri harina kujairika kushandiswa, rinowanzo kukonzera kushamwaridzana nebhola hooliganism. Iyo yemazuva ano ultras yekufamba ...
Exercise bike: kubatsira kana kukuvadza?
Vazhinji vedu pane imwe nguva muhupenyu hwedu vanofunga nezve maitiro ekuita nhamba yedu kuti ive yakajeka uye sportier. Nezveizvi, mitambo yakasiyana siyana inouya kuzonunura, pamwe neyemukati mekamuri ne…
Inwa mazai akasviba emusuru - zviri nyore, zvine hutano uye zvakachengeteka!
Vakadzi vanoda nenzeve dzavo - uye nemeso avo zvakare. Dzimwe nguva kurara kwakanaka kwakagadzirira kupa zvese kuitira kuti ubude nebrunette inokatyamadza ine yakaisvonaka pumped torso. Uye nenzira, ha ...
Polyathlon: chii ichi?
Zvinoreva izwi rekuti polyathlon rakabatanidzwa mitambo kutenderera-kwese, chinangwa cheicho kusimudzira kwesimba uye kutsungirira. Misiyano yakasarudzika ye polyathlon - kuwanikwa, tarisa pahutano uye mukana wekuita mumutambo uyu kune vanhu vakasiyana ...
Chii chinonzi muchinjiko: tsananguro, maficha, matipi
Kuyambuka-nyika ichimhanya ndiyo mutambo unofarira wevanhu vazhinji. Kuzivikanwa kwayo kunotsanangurwa neicho chokwadi kuti mamiriro akakosha kana zvishandiso hazvidikanwi: zvipfeko zvakanaka uye nzira dziri mupaki. Wese munhu anogona kudzidzira akazvimirira nekusarudza ...
Nzira yekukunda sei kurwa mumugwagwa pasina kuva nemitambo yemitambo?
Kunyangwe kana iwe waimbove mhare yenzvimbo yedunhu, guta, dunhu, nyika, pakupedzisira, mune karati, judo, sambo uye zvichingodaro - ichi hachisi chivimbo chekukunda kwako muhondo mumugwagwa. Kurwira ne ...
Iyo yakakurumbira kerambit banga. Dhizaini uye ushandise
Wese munhu akapusa munguva pfupi inotevera anofunga nezve nzira yekuzvidzivirira, uye pakupedzisira anoshandisa akasiyana siyana ekuzvidzivirira. Inogona kunge iri imwe yemhando yezvombo zvehondo kana pepuru yekupuruzira, asi ...
Alexey Cherepanov: hupenyu uye kufa kwemutambi
Dambudziko rakaitika makore akati wandei apfuura munhandare yeguta reChekhov padyo neMoscow richiri kurangarirwa mune vateveri veOmsk "Vanguard". Rufu rwaAlexei Cherepanov harina kusiya chero munhu asina hanya. Zvingaitika sei izvi zvinoramba ...
Nyika rekodhi yekusundira-kumusoro kubva pasi. Zvimwe zvinovanzika zvekuita maekisesaizi
Nhasi, kune nhamba yakakura yemakirabhu emitambo nemajimu, asi kusundira-kumusoro kuchatariswa seyakanyanya uye inoshanda kurovedza muviri zvakadaro. Panguva ipi neipi, pasi pemamiriro ezvinhu, munzira dzakasiyana ...
Denis Gusev: kureba, uremu hwemujaho. Bodybuilder biography uye zvaakawana
Munhoroondo yekuvaka muviri wenyika, kune nyeredzi dzakawanda dzinogona kushamisika nehukuru hwadzo. Asi nhasi tirikutaura nezvevanhu vedu vakawana budiriro yakakura kwete mumakwikwi enzvimbo yokumusha kwedu, asi ...
Chii mhasuru dzinoshanda pane bhasikoro rekurovedza uye kuti rinoshanda sei
Mabhasikoro ekurovedza muviri anozivikanwa chaizvo. Chokwadi, zvinowanikwa kuvanhu vezera dzakasiyana uye huwandu hwakasiyana hwekugwinya kwemuviri. Uye mafashoni ekuvaisa mumakamuri nedzimba haasati apfuura kusvika zvino ...
Vanasikana vanehusimbe vakabvira kare mufashoni, uye kuve wakawandisa kwete kungowedzera runako, asi kunokonzeresa huwandu hwezvirwere, kuvandudza kusava nechokwadi, kunogadzira chimiro chakashata. Vakadzi veChubby havagone kupfeka ...
peji 1 peji 2 ... peji 124 Next Page
Mibvunzo ye54 mu database yakagadzirwa mu 0,599 masekondi.